लसुन झींगा - Thermomix रेसिपी | ThermoRecines
माछा13 मिनेट4 व्यक्ति
यो एक शुरुवात हो कि हामी सबैभन्दा मनपर्छ। यो क्रिसमस मा निश्चित बर्षहरु मध्ये एक हो र बर्ष को बाकी, विशेष गरी जब हामी पाहुनाहरु छन्.
तिनीहरू एक क्षणमा बनाइन्छन् र सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले तिनीहरूलाई बनाउनु जस्तै तिनीहरूलाई खानु हो किनकि उनीहरूले तुरुन्तै आफ्नो तातो हराउँछन् (जब हामी यो फोटो लिन्छौं जुन हामीले पहिले नै आधा खाइसकेका छौं)। त्यसकारण तिनीहरूलाई सेवा दिन सल्लाह दिइन्छ माटोको भाँडा कि अधिक को लागि गर्मी राख्नुहोस्।
म मुश्किल नुन थप्न, तर यो स्वाद को कुरा हो। यदि हामी प्रयोग गर्छौं भने फ्रिज गरिएको झींगा, तिनीहरूलाई पहिले डिफ्रस्ट गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई निकाल्नुहोस् र भान्साको कागजसँग सुकाउनुहोस्।
यदि तपाइँ यो मनपराउनुहुन्छ, अन्त्यमा (अन्तिम सेकेन्डमा) तपाइँ आधा नींबू को रस थप्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि म व्यक्तिगत रुपमा मात्र उनीहरुलाई तेल संग, लसुन र खोर्सानी।
उनीहरु तपाइँलाई दिन को लागी आदर्श छन् तपाइँको पास्ता बर्तन को लागी एक विशेष स्पर्श। यिनीहरु संग यी प्रयास गर्नुहोस् चाउचाउ वा यस मा fusili नुस्खा… शानदार!
1 झींगा स्क्याम्पी
यो डिशलाई मसलादार पोइन्ट दिन मिर्च प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्।
खाना पकाउने समय: 13M
लसुन को5लौह
१ वा २ केयेन वा खोर्सानी भाग
E 350०-400०० g पिलिएको झींगा
हामी गिलास र कार्यक्रममा तेल र लसुन खसाल्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 3। हामी तल झर्छौं, स्प्याटुलाको साथ, भित्ताहरू र सिसाको आवरणमा ब्लेडहरू तिर रहेको अवशेषहरू।
हामी खोर्सानी र कार्यक्रम थप्छौं १० मिनेट, भेरोमा तापमान र चम्चा गति, बेकर बिना ताकि यो राम्रो बाष्पीकरण।
पहिले छोटो नुन र कार्यक्रमको साथ छिडकिएको, छीलिएको झींगा थप्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान र चम्चा गति, बेकर नछोडी।
हामी शीशाबाट हटाउँछौं र तुरून्त सेवा गर्दछौं।
थप जानकारी - लसुन, बच्चा ईल्स र झींगाको साथ नूडल्स / Fucili zucchini र झींगा संग
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, Celiac, सजिलो, ल्याक्टोज असहिष्णु, अण्डो असहिष्णु, १ 15 मिनेट भन्दा कम, क्रिसमसको, माछा, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » झींगा स्क्याम्पी
म तिनीहरूलाई पनि गर्दछु, तिनीहरू स्वादिष्ट हुन्छन्।
यो सत्य हो, Mª। टेरेसा। तिनीहरू एक क्षणमा गरिन्छ र तिनीहरू उत्तम छन्। शुभकामना।
र पुरानो थर्मामिक्स को लागी? के गति छ? पुतली संग राम्रो छ? धन्यवाद
नमस्ते मारिया, २१ को लागि तपाईले पुतली ब्लेड र भेलमा राख्नु पर्छ। १ अभिवादन।
मलाई लसुनको झींगा मन पर्छ ।सुर राम्रो फोटो !!
फल र पास्ता सलादको लागि नुस्खा किन प्रकाशित गरिएको छैन? त्यहाँ केहि गल्ती भएको हुनुपर्छ।
तपाईंको व्यंजनहरु को लागी धन्यवाद, तिनीहरू महान छन्।
नमस्ते डेल्फी, म कुनै समस्या बिना देख्छु। तपाईं पहिले देखि नै यो देख्न सक्नुहुन्छ? अभिवादन र म धेरै खुसी छु कि तपाईलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो।
नमस्कार !!, म अहिले उनीहरुलाई पठाउँदै छु ...
एक प्रश्न, के तिनीहरू एकपटक बनाउन सकिन्छ?
नमस्ते मोनिका, मैले उनलाई फ्रिज गर्ने कोसिस गरेको छैन, मलाई थाहा छैन कि तेल कस्तो हुन्छ। म आशा गर्दछु तपाईं तिनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ। शुभकामना।
मैले तिनीहरूलाई गत हप्ता घरमा र कूल सफलता दिएँ। गन्ध सडकमा बाहिर आयो।
म तपाईंलाई राम्रो र सजिलो रेसिपीहरूको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले मेरा साथीहरू र स्वादिष्ट चीजहरूको लागि तरकारी कोका पनि बनाएँ।
मलाई खुशी छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मन पराउनुभयो, एस्ट्रेला! अभिवादन र हामीलाई हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
मैले झींगा बनाएको थिएँ र ती स्वादिष्ट थिए
म धेरै खुसी छु, कार्मेन!
तिनीहरू फ्रिज गरिएको झींगासँगै बनाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ तिनीहरू सबै व्यंजनहरू जत्तिकै स्वादिष्ट हुनेछन्
नमस्कार, मैले भर्खर तपाईको ब्लगमा गएँ र म मोहित भएँ ...। !!! यो मात्र हो कि मसँग एक हप्ताको लागि थर्मोमिक्स छ र म यससँग धेरै खुसी छु ... मसँग यति धेरै रेसिपीहरू छन् कि म बनाउन चाहान्छु कि कहाँबाट सुरु गर्ने मलाई थाहा छैन। झींगा एकदम राम्रो देखिन्छन्, म तिनीहरूलाई पनि हेम हेहे बनाउनेछु।
म क्रेपहरू खोज्दैछु र म यो फेला पार्न सक्दिन ... के तपाईं मलाई यो कहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ? धन्यबाद ...। यी सबै स्वादिष्ट व्यंजनहरु को लागी।
स्यान्ड्रा, म सँग दुई हप्ता पहिले बनाइएको क्रेप्सहरू छन्, तर मैले अहिलेसम्म यस पढाई पोस्ट गरेको छैन। मँ केहि दिनमा यसलाई पोस्ट गर्ने प्रयास गर्नेछु।
नमस्ते सिल्भिया, म यसको धेरै कदर गर्छु ... मेरा केटीहरूले तिनीहरूलाई मन पराउँछन् र तिनीहरूलाई खुशी पार्न यो एक धेरै स्वस्थ तरीका हुनेछ।
धन्यबाद र म ध्यान दिनेछु ...
इसाबेल मा बर्मेडेज भन्यो
तपाईको ब्लग को लागी धन्यवाद, यो पहिलो पटक हो कि मैले प्रवेश गरेँ र मलाई यो एकदम चाख लाग्यो। चुम्बनहरू
इसाबेल मा बर्मेडेजलाई जवाफ दिनुहोस्
के तिनीहरू बनाइन्छ र अर्को दिन खानलाई गरम गर्न सकिन्छ?
मार्फे, मलाई कुनै समस्या बिना नै लाग्छ ... जब सम्म तपाईं ती कार्य गर्नुहुन्छ र लक्ष्यहरू फ्रिजमा चिस्याइन्छ
नमस्कार, मैले तिनीहरूलाई स्थिर बनाएको छु तर तिनीहरू अलिकता पानी बाहिर आए तर राम्रो
त्यो सँधै स्थिर जस्तासँग हुन्छ, त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई धेरै घण्टासम्म ड्रेभ र डिफ्रस्ट गर्नुपर्दछ।
नमस्ते !!!! उनीहरू कत्ति राम्रो बाहिर आए, धेरै ग्रेसहरू, हो, मैले बाँया पट्टि राखेको छु ताकि तिनीहरूले मलाई तोड्न नपरोस् !!! चुम्बनहरू
MMM कि राम्रो देखिन्छ, म तिनीहरूलाई उस्तै तरीकाले बनाउँछ, म झींगा मन पर्छ :)।
यी झींगा स्वादिष्ट छन्! तिनीहरू एक उपाध्यक्ष हुन् ... र त्यो रोटी तेलमा भिजेका छन् ...
नमस्ते लियोनोर, चम्चाको वेग हुनु आवश्यक छैन। तर यसले बायाँ पट्टि घुम्न कहिले पनि चोट पुर्‍याउँदैन। भाग्यमानी!
आज मैले यो विधि बनाएँ र यो राम्रो भयो ... तर मैले भन्न पर्छ कि झींगा थोरै कच्चा छ, म यसलाई एक मिनेट अब छोडिदिन्छु। झींगा स्थिर थियो तर पहिल्यै पिग्लिएका थिए। मैले के गल्ती गरेको छु? धन्यबाद
नमस्ते सारा, हुनसक्छ तिनीहरू बाहिरी भागमा पग्लिए जस्तो देखिन्छ भने पनि यो हुन सक्दछ कि तिनीहरूको भित्री भाग अझै स्थिर थियो। झींगा एक धेरै नाजुक उत्पादन हो जुन थोरै पकाउने समयसँगै सहि हुन्छ। सायद तिनीहरूलाई गिलास भित्र १ मिनेट आराम गर्न दिँदै, तर मेशिन बन्द छ, पर्याप्त हुन सक्छ। यो झिंगीको आकारमा पनि निर्भर गर्दछ, किनकि त्यहाँ सानोदेखि XL सम्म छन् ... अर्को पटक म सिफारिस गर्दछु कि समय बितिसकेपछि १ मिनेट आराम गर्नुहोस् र उनीहरू भित्र पकाइएको छ कि छैन भनेर झिंगा खोल्नुहोस्।
अर्को टिप डिफ्रोस्टिing गर्दैछ: हामीले खाना बनाउनु भन्दा २ 24 घण्टा पहिले फ्रिज भित्र र फ्रिज भित्र यस्तो ठाउँमा राख्नु पर्छ जहाँ अत्यधिक पानी निकाल्न सकिन्छ। त्यसपछि तिनीहरूलाई अधिक पानी हटाउन शोषक कागजको साथ राम्रोसँग सुकाउनुहोस् र यसरी तिनीहरूलाई अझ राम्रो बनाउनुहोस्।
तपाइँ मलाई अर्को समय को बारे मा बताउन छौँ! अंगालो र हामीलाई लेख्न को लागी धन्यवाद।
नमस्कार शुभ दिन, शुभकामना नयाँ साल। जब तपाईं झींगालाई मुखमा राख्नुहुन्छ, तपाईं बायाँतिर मोड्नुहुन्न, मँ बर्षको अन्त्यको लागि तिनीहरूलाई बनाउन चाहन्छु र म डराउँछु कि उनीहरू राम्रोसँग बाहिर निस्किनन्। यो कि राजनीतिक परिवार आउँदैछ।
Laly लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते Laly! म मात्र यस अवस्थामा बायाँ मोड गर्नेछु। उनीहरू निश्चित छन् तपाईको लागि राम्रो हुन्छ। शुभकामना छ त्यस डिनरको साथ! तपाई कसरी सफल हुनुहुनेछ तपाईले देख्नुहुनेछ! अँगालो र नयाँ सालको शुभकामना!
मलाई यत्तिको चाँडो जवाफ दिनु भएकोमा धन्यवाद। नयाँ वर्षको शुभकामना र नयाँ सालको शुभकामना।
तपाईंले बायाँ मोड पल्टाउन बिर्सनुभयो। मैले यो बायाँ नबनाईकन गरें र त्यहाँ काटिएको धेरै झींगा थिए।
चम्चा गति मा काट गर्न धेरै शक्ति छैन तर तपाईंको योगदान धेरै राम्रो छ !!
नमस्कार !! Tm5 को साथ गर्न, के गति र समय समान छ?
ANGELS लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार एन्जलस, चरण २ कार्यक्रममा minutes मिनेट, तापमान १२० डिग्री र चरण set सेट तापमान १२० °। गति समान छ। चुम्बनहरू !!
मैले उल्टो मोडमा राखेको छु किनकि यसले मलाई झींगा कुचल्न सक्छु भनेर ...
ताजा बदाम केक